कसैले ढोका बजार्‍यो। यता मेरो सातो गयो।
सासुमा र जेठाजीले पनि यसरी नै ढोका बजारेर आएका थिए। मलाई जिउभरि मट्टितेल खन्याएका थिए।
त्यही दिनदेखि मेरो मनमा टिचर बन्ने सपनाले टाउको उठाएको थियो।
'म पनि टिचर बन्ने छु र शिवदादा जस्ता केटाहरुलाई ठिक पार्ने छु।' मैले मनमनै आफैसँग वाचा गरेँ।
बसको पछिल्लो सिटमा मेरा हात खेलाउँदै उसले भनेको थियो, 'मेरो आफ्नै पसल भएपछि तँलाई म क्याम्पस पढ्न पठाउँछु।'
मेरा आँखा भरिएर आएका थिए।
तनवीर केही बोल्नै सकेन। माई यस्तै हुन् भनेर टार्न खोज्थ्यो। ऊसँग माईबाबाको अघि बोल्ने हिम्मत पनि थिएन।
तनवीरको घरमा मलाई घुटन हुन थाल्यो। मैले गरेको काममा दोष निकाल्दै सासुमाले मलाई तथानाम बोल्न थालिन्। केही समयपछि त आमाजु र जेठाजु पनि मिसिए। जेठाजुले टन्नै दहेज ल्याएका थिए रे। जेठानीचाहिँ केही बोल्दिनथिन्।
अहँ! तनवीर मलाई लिनै आएन। गएकै दिनदेखि उ मलाई लिन आउला कि भन्ने आशले बाटो हेरेर बस्न थालेकी थिएँ। तनवीर कसरी त्यति निर्मोही हुन सक्छ?
एक मन त मलाई लाग्यो तनवीरले मुख फेरेको जिन्दगी बाँचेर के गर्नु?
मलाई मर्न मन लागेको त्यो पहिलो पटक हो।
गाउँलेहरु हुरुरु आए। त्यो देखेर सासुमा र जेठाजु रोकीए। उनीहरु गाउँलेसंग झगडा गर्दै थिए म भागेर पुलिसथाना गएँ।
आँगनभरी पुलिस आएर केरकार गरे। तनवीरलाई पनि थर्काए। उसले भनिदियो,'उसको पेटको बच्चा मेरो हैन!'
मेरो वाक्य बस्यो। आँखाबाट आँसु मात्रै झरे। म एकदम लाटी भएँ। तनवीर के साँच्चै आफै बोलिरहेको थियो? अझै पनि मलाई पत्यार छैन। तर के गर्नु त्यो आवाज उसैको थियो जसले मेरो मुटुमा हिर्काएको थियो।
म कहिलेकाहिँ कल्पना गर्थेँ। उसले मेरो पेट सुमसुम्याउँदै भन्ने छ मलाई तँ जस्तै विटिया चाहिन्छ। तर यहाँ त उसले अर्कै चिज भन्यो।
पुलिसले खोजिदिएको एनजीओको सेल्टरमा म कैयौँ दिन बसेँ। त्यहाँ गएपछि मलाई थाहा भयो म पनि त मान्छे हुँ। त्यहाँ गएपछि मैले थाहा पाएँ सम्मानपूर्वक बाँच्ने भनेको के हो। मैले थाहा पाएँ आफुलाई सबै भन्दा बढी माया गर्नुपर्छ र थाहा पाएँ म कमजोर छैन। त्यहाँ मैले आफैले आफैलाई भर गर्न सिकेँ, खुसी पार्न सिकेँ।
यत्ति हो तनवीरलाई विर्सिन भने सकिनँ।
तर उबाट टाढा भैजान पनि तयार पारेँ आफुलाई।
तनवीरको परिवारले महिनाको ६ हजार रुपैयाँ मानाचामल दिने भएपछि म सेल्टरमा बसिन। एक्लै कोठा खोजेर बस्न थालेँ।
तर एकदिन पेट बेस्मारि बटारियो। म असह्य बेदनाले कोठाभित्र छटपटाइरहेँ। रात पर्यो पेट खान छोडेकै थिएन। म आधा होसमा थिएँ।
ढोका खोलेर तनवीर आयो मलाई उठायो। त्यसपछि अस्पताल पुगुन्जेल म होसमै थिइन। कसरी उ आएको थियो कुन्नी?
हाम्रो बच्चा भयो बेटी। तर तनवीर त मलाई अस्पताल छोडेर गैसकेछ।
हो त नी किन बस्थ्यो र उसले भनेको थियो 'यो पेटको बच्चा मेरो हैन।'
तर, उ किन आयो मलाई बचाउन?
बेटीको अनुहार देखेपछि मैले सबै विर्सिएँ।
तीन महिना वित्यो।
आज पनि उ विहानै यहीबाटो आइरहेका थियो सधैँ झैँ।
उ आइरहेको हेरिरहन मलाई असाध्यै मन पर्छ। यहाँनिर आइपुग्दा मेरो नाकमा ठोक्कीने उसको गन्ध जति प्रिय त मलाई अरु केही लाग्दैन।
मलाई नहेरी गयो उ सधैँ झैँ।
आज त मलाई खिसिक्क हाँसो उठ्यो।
पहिले पहिले त एकक्षणका लागि मन सिसा झैँ झर्‍याम्म हुन्थ्यो। कति निर्मोहि हुन सकेको होला भनेर।
पहिले उ नबोले पनि जब हेर्थ्यो नि मलाई आफु संसारकी सबभन्दा राम्री स्वास्नीमान्छे हुँ भन्ने लाग्थ्यो।
‍‍‍‍‍अब म पहिले जस्ती छैन।
निक्कै फेरिएकी छु। फेरिएकी मलाई देखेर उसलाई कस्तो लाग्दो हो कुन्नी! उसले मतिर फर्केर हेरे पनि देख्थ्यो होला नि। उसले देख्थ्यो म झन् राम्री भएको, जस्तो उसलाई मनपर्ने पूर्णिमाको जून हुन्छ। देख्थ्यो म निर्धक्क हाँस्न थालेको जस्तो उसको आँगनको घण्टीफूल फक्रिदा हाँस्छ।
हाँस्नु सेहदका लागि राम्रो हो भन्थ्यो उ। मैले अहिले थाहा पाएँ हाँस्नु जिन्दगीका लागि झन् धेरै राम्रो हो।
म उस्तै छु।
उसलाई उस्तै प्यार गर्ने। उ जस्तो भएपनि मेरो प्यार त प्यार नै हो। उसले एक दिन बुझेर पनि सक्ने छैन मेरो प्यारको तागत, मेरो प्यारको मतलब।
आज उसको अनुहार सधैँ भन्दा उज्यालो देखेर मेरो मन पनि फुरुङ्गै परेको थियो।
के उसले आफ्नै दोकान खोल्ने अनुमति पायो ?
आजै मैले सुनेँ उसको त अर्को विहे हुँदै रहेछ। मेरो धरती फेरि एकपटक हल्लियो।
मलाई किन त्यस्तो भयो ? उ विना पनि बाँच्छु भनेर सम्झाएकै त छु आफुलाई। फेरि पनि किन उ अर्कैको हुँदैछ भन्ने सुन्दा मेरो संसारै काँप्छ?
म एकहप्ता सम्म उसलाई हेर्न अगाडीको बाटोमा गइन। उ खुसी हुन सक्नेरहेछ म विना पनि। मलाई अब देखि उसलाई हेर्न पनि मन लागेन। हो त नि किन सधैँ मैले मात्रै हेर्नु त? उसले त मलाई देख्या नदेख्यै गर्छ।
आजै विहान त हो मेरो मनले मलाई भन्यो- यहाँ तँलाई देखेर उसलाई हाँसीखुसी बाँच्न गाह्रो भयो भनेँ?
अर्को मन भन्दै थियो - तँ नभएको बेला उसलाई केही भैहाल्यो भने?
'तर के म उसको खुसी हेर्न सक्दिन?,' मेरो मनले मलाई सोध्यो।
'उसको खुसी हेर्न त सक्थेँ तर उ अर्कैको भएको कसरी हेरुँ?'
धेरै बेर कुरामा रुमलिएको मनले अन्तिम पटक भन्यो - यो गाउँ छोडेर जाउ।
त्यसपछि मन चुपचाप छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण २८, २०७३ ०९:४९:४४